Kuyini ukufunda okubili? Ubani ofunda ulimi - uqala nini ukufunda ulimi?
Ukuqeqeshwa kwethu kokufunda okubili
Ukufakwa kogesi kabili
Ukufaka i-Automation Duaal (i-webpage inthanethi maduzane)
Uhlanganisa okuhle kakhulu kwezwe le-2: ukufunda esikoleni nokufunda endaweni yokusebenzela. Uchitha izinsuku ezingu-3 esitezi somsebenzi.
Uzofunda izifundo ezijwayelekile kanye nolwazi olunembile nolwazi olusebenzayo lwesifundo sakho esikoleni.
Uhlakulela ulwazi oluwusizo kanye nolwazi olufanele lomsebenzi enkampanini langempela.
Inkampani kanye nesikole baxoxisana ngaso sonke isikhathi futhi batshele ukuthi yini ongayifunda.
Ngesikhathi esincane uthola isisekelo esinamandla sokufunda kanye nomthamo omuhle wokuhlangenwe nakho okwenzekayo futhi uthuthukise isipiliyoni esifanele emsebenzini endaweni yezifundo.
Uthola idiploma yakho emfundweni yesibili futhi ngokushesha uyisinyathelo esikhulu phambi kontanga yakho!
Kungani ukhetha ukufunda okubili?
Ufunda endaweni yangempela umsebenzi imvelo
Wena ukwandisa amathuba emisebenzi yakho
Uyavumelana namathuluzi wamanje nobuchwepheshe
Ukufunda ngokwenza inyuka ugqozi.
Usebenzisa amakhono athile abalulekile emakethe yomsebenzi, njengokubambisana, ukuthatha isinyathelo, ukufika ngesikhathi, ...
Ingabe ukhokhwa ngokufunda okubili?
Ngezinsuku oyikho kumqashi, uzovame ukukhokhelwa. Izimali zizinzile futhi zixhomeke eminyakeni yakho kanye nolwazi. Labo abakhetha ukufundwa kabili bahlala bekhokhiswa intela ngenxa yabazali futhi wena noma abazali bakho nabo bathola inzuzo yomntwana.
Uyini umehluko phakathi kokufunda okubili kanye nokufundela umsebenzi?
Izigaba ngokuvamile zihlala kancane kunenkambo yokufunda kabili. Ngonyaka wesikhombisa wemisebenzi yokusebenza, isibonelo, ulandela amaviki angu-8 internship ohlelweni lokufunda olujwayelekile (lezi zinsuku zezinsuku ze-40)
Labo abakhetha umsebenzi wokufunda kabili kuze kube yizinsuku ezingu-130 enkampanini.
Ku-internship, ngokuyinhloko inhloso ukuthi usebenzise lokho okufundile esikoleni. Ekufundeni okubili, ufunda ngempela emsebenzini.
Kungani sifuna ukufunda esikoleni sethu?
I-GO! I-Spectrumschool eDeurne (i-Antwerp) iyiphayona ekufundeni kokubili. Sivele sinikeza iminyaka engaphezu kwe-25 yokufunda kabili ohlelweni Ukufunda + Ukusebenza. (i-part-time education also double learning)
Ulwazi olungaphezulu mayelana nokufunda kabili.
Ukulandelana kokubili kokufunda
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa ungavakashela iwebhusayithi ye-Dual Learning Flanders.
Hamba! I-Spectrumschool yabamba iqhaza ku-Ideal Dual, lapho sakha umqondo oseduze nephothifoliyo yomfundi we-Dual Learning.
Sisebenzisana nephrojekthi ye-European Erasmus + "Inkulumo". Uhlelo lokusebenza lokulandelwa kwe-trajectory yokufunda emsebenzini wokusebenza.